काठमाडौंमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय आइसिटी सम्मेलन सुरु - Living with ICT
Home / Featured / काठमाडौंमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय आइसिटी सम्मेलन सुरु
Shiva Basnet Feb 1, 2015	Leaveacomment
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)को आयोजनामा काठमाडौंमा दुईदिने अन्तराष्ट्रिटय आइसिटी सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको यस १५औं संस्करणको मूल नारा ‘विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि आइसिटी’ रहेको छ
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सामाजिक रूपान्तरणका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी)को उपयोग महत्त्वपूर्ण हुने भनाइ राखे । सरकारले विद्युतीय सुशासनअन्तर्गत आइसिटीको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन लागिपरेको बताउादै यसमा मन्त्री डा. रिजालले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेको औंल्याए ।
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल र क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले सम्मेलनले नेपालमा प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा स्पष्ट एजेन्डा दिने अपेक्षा व्यक्त गरे । सम्मेलनका प्रमुख वक्ता इण्डियन इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टका प्रा.डा. सुभाष भट्नागरले नेपालमा प्रविधि प्रयोगको दर बढ्नु सकारात्मक रहेको चर्चा गर्दै यसबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने भनाइ राखे ।
भारतका धेरै गाउामा मोबाइल र एसएमएसको प्रयोग गरी गरीबी निवारण गर्न पहल गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. भट्नागरले यो अभ्यास नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुने विचार राखे । सम्मेलनको पहिलो दिनअन्तर्गत पहिलो सत्रमा ‘इमर्जिङ टेक्नोलोजी फर आइसिटी फोर डी’ विषयमा विषय विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
इन्टरनेट सोसाइटी एशिया प्यासिफिक सिंगापुरका म्यानेजर नाभिड हकले ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स सोसिओ इकोनमिक प्रोस्पेक्ट’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने इसिमोडका सागररत्न वज्राचार्यले ‘कम्युनिटी बेस्ड फ्लडी अर्ली वार्निङ सिष्टम’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको प्रमुख आतिथ्य रहेको दोस्रो सत्रमा ‘पब्लिक सर्भिस डेलिभरी र गभर्मेन्ट ट्रान्सफर्मेशन’ विषयक कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो चरणमा भारतका ज्ञान व्यवस्थापनका विज्ञ जयलक्ष्मी चितुरले ‘पब्लिक सर्भिस डेलिभरी इन्साइट्स डेभलपिङ कन्ट्रिज’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । सम्मेलनमा नेपालको सार्वजनिक सेवा आधुनिकीकरणका विषयमा विषय विज्ञ र सहभागिबीच विशेष बहस र अन्तरक्रियासमेत भएको छ । सोमवार ‘ज्ञानमा आधारित उद्योग र रोजगारी’ तथा ‘आइसिटीका लागि व्यवसायिक शीप विकास’ विषयक सम्मेलन हुादै छन् ।
Previous वोर्ल्ड लिंकले ल्यायो १०० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट
Next १५ औं आइसिटी सम्मेलन सम्पन्न